Caro ka dhalatay tijaabada nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi - BBC News Somali
Caro ka dhalatay tijaabada nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi
9 Sebtembar 2016
Image caption Punggye-ri, goobta tijaabada lagu sameeyey
Kuuriyada Koonfureed ayaa 'taxadar xumo halis badan' ku tilmaantay tijaabadii nukliyeerka ee ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Madaxwaynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye, ayaa sheegtay in Pyongyang ay arrintan dhaxalsiin doonto cunaqabatayn iyo go'doomin hor leh.
Shiinaha oo ah dalka ugu wayn ee ay saaxiibaha yihiin Kuuriyada Waqooyi ayaa isna cambaareeyay talaabadaasi.
Maraykanka ayaa ku tilmaamay tallaabo daandaansi ah oo liddi ku ah qaraaro ka soo baxay Qaramda Midoobay.
Waa gantaalkii ugu awoodda badnaa ee Kuuriyada Waqooyi ay abid rido, waxaana loo malaynayaa in qaraxa nukliyeerkaasi uu xataa ka awood badan yahay midkii Hiroshima lagu dhuftay dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka.
Hore ayaa waxaa u jiray dhul gariirro dad-samee ah oo xajmigaas leh, kuwaasoo ka dhacay isla goobta tijaabada laga sameeyey, laakinse wax xaqiijin ah lagama hayo Kuuriyada Waqooyi.
Image caption Waddamada deriska ayaa walaac ka qabo niyukliyeerka Kuuriyada Waqooyi
Hay'adda daraasaadka lakabyada dhulka ee Maraykanka ee la socota dhaqdhaqaaqyada lakabyada dhulku waxay sheegaysaa in gariirka waqooyiga bari ee dalkaas laga dareemay uu qarax ka dhashay, laakiin ma aysan sheegin nooca qaraxa. Maraykanku wuxuu sheegay inuu isha ku hayn doono waxa ay noqon doonto sababta qaraxa.
Ra'iisul wasaaraha Japan, Shinzo Abe, wuxuu shir jaraa'id ka sheegay in Japan ay cabasho u gudbisay Pyongyang. Wuxuu sheegay in tallaabadan aan loo dulqaadan karin
Kuuriyada waqooyi Qaramada Midoobay ayaa ka mamnuucday inay samayso wax tijaabo ah oo ku saabsan nukliyeer ama tiknoloojiyada gantaallada, laakin bilihii dhowaa waxay wadday inay tijaabiso gantaallada ballistigga, ayadoo hanjabaadana u jeedinaysay waddamada aysan isku fiicnayn.
Tijaabadii ugu dambeysay ee ay samaysay January ayaa la aaminsan yahay inay ahayd bam hydrogen ah, hase yeeshee tijaabada iminkana waxaa loo arkaa inay tahay tii ugu xoogga badnayd ee ay abid samayso.